विपद्काे बेला कसलाई सम्पर्क गर्ने, के गर्ने ? के नगर्ने ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) विपद्काे बेला कसलाई सम्पर्क गर्ने, के गर्ने ? के नगर्ने ?
विपद् पत्रकारिता सार्वजानिक
३० भदौ, काठमाडौं । विपद्का बेला प्रभावित समुदायलाई धेरै थरीका जानकारी आवश्यक पर्छ । के भयो ? अब के गर्ने ? सुरक्षित स्थान कहाँ छ ?
कसलाई सम्पर्क गर्ने ? के गर्ने ? के नगर्ने ? लगायत यी प्रश्नका जवाफ तत्काल सञ्चारमाध्यमबाट आउन सक्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकालगायतले दिने सूचना विपद् प्रभावितका लागि पहिलो राहत हुने गर्दछ ।
विपद्का समयमा सञ्चारमाध्यमले के कसरी समाचार, विचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रीय रही ‘विपद् पत्रकारिता’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ । यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सङ्गठन ‘युनेस्को’ले बेलायतस्थित ‘वर्नमाउथ युनिभर्सिटी’सँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो पुस्तक सार्वजानिक गरिएको हो ।
युनेस्कोमा कार्यरत सञ्चारविज्ञ चिन्दु श्रीधरण, इनर थोर्सन र निर्जना शर्माद्वारा संयुक्त रुपमा सम्पादित अङग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा सम्पादित सो पुस्तकको पहिलो अध्यायमा भूकम्पपछि नेपाली सञ्चारजगत्ले समाना गर्नु परेका मुख्य मुख्य मुद्दा, दोस्रो अध्यायमा विपद् पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छ । विपद्का विभिन्न चरणमा सञ्चारमाध्यम र स्वयम सञ्चारकर्मीले गर्न सक्ने कार्यका बुँदालाई सूचीकृत गरिएको छ ।
पुस्तकले तेस्रो अध्यायमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्यालाई केन्द्रित गरेको छ । चौथो र पाँचौँ अध्यायमा विपद् पूर्वतयारीका अवस्थामा के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भनेर मूल्याङ्कन पुस्तकले गरेको छ । साथै विपद् उत्थानशीलतामा सुधार गर्न सञ्चारगृह, सञ्चारकर्मी, अनुसन्धानकर्मी, पत्रकारिताका शिक्षकलगायतले गर्नुपर्ने कामलाई सुझावका रुपमा पुस्तकभित्र समावेश गरिएको छ ।
युनेस्कोका नेपालस्थित प्रतिनिधि क्रिश्चियन म्यानहार्ट र त्रिविवि आम सञ्चार विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले संयुक्त रुपमा सो पुस्तक सार्वजानिक गरेका थिए ।
सो अवसरमा म्यानहार्टले विपद्ले के के पाठ सिकाएर गए र आगामी दिनका सम्भावित विपद्बाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पुस्तकले अनुसन्धानमूलक रुपमा प्रस्तुत गरेको चर्चा गर्दै प्राज्ञ, पत्रकारिताका विद्यार्थी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा कार्यरत सबैका लागि पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। विभागीय प्रमुख खनालले चारवर्षे स्नातक तहको पाठ्यक्रममा विपद् पत्रकारिता समावेश गर्न लागिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पुस्तकले औँल्याएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सुझाव दिए ।
पुस्तकका लेखक श्रीधरण, थोर्सन र शर्माले सङ्क्षिप्त धारणा राख्दै विपद्मा पत्रकारिताले जीवन बचाउन सक्छ, जीवन कसरी बचाउने भन्ने ध्येय पुस्तकले राखेको छ भने। शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले अहिले पनि नेपाली सञ्चारगृह विपद् जोखिमका क्षेत्रमा संवेदनशील रहेको चर्चा गर्दै पुस्तकले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ भने।
व्यावसायिक आपत्कालीन योजना
अघिल्लो लेखसुदूरपश्चिमको बाजुरा बाहेक आठ वटा जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी
अर्को लेखशेयर बजार : आज छिमेक लघुवित्त विकास बैंक शीर्ष स्थानमा
दाङबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द
लकडाउन प्रभाव : राजविराजका सबै पत्रपत्रिका बन्द
पत्रकार महासङ्घले सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध अझै बलियो